Madaxwyene Farmaajo oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho – Somali Top News
Madaxwyene Farmaajo oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa soo gabagabeeyay booqasho saddex maalin qaaddatay oo uu ku tagay dalalka Burundi iyo Jabuuti. Waxa uu wadahadal laba-geesood ah la -yeeshay dhiggiisa Burundi iyo Jabuuti.
Madaxweynaha iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa gaaray magaalada Addis Ababa, halka Madaxweyne Farmaajo uu ka baaqday safarkii Addis Ababa.
Qorshihii dowladda Itoobiya waday ee ahaa kulansiinta Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweyne Muuse Biixi ayaa socon waayay, kaddib caqabado ku yimid, Madaxweyne Farmaajo ayaa aqbalay mabda’ahaan kulanka soona dhoweeyay, balse waxaa dood ka dhashay cida yeelaneysa doorka dhex dhexaadinta iyo in kulanka noqdo labo geesood, isla markaana Itoobiya yeelato door fududeyn oo kaliya.
Socdaalka maadxweynaha ayaa lagu sheegay inuu qayb ka yahay dadaallada ay dowladda Soomaaliya ugu jirto hagaajinta xiriirka waddamada gobolka iyo kuwa ay ciidammada ka joogaan Soomaaliya,iyadoo Burundi iyo Jabuuti ay qayb ka yihiin howlgalka AMISOM.
← AMISOM to handover Somalia’s military academy at the end of the month
AU reviews logistical challenges hindering troop operations in Somalia →
Ciidamada Booliska oo Muqdisho ku qabtay nin qarax sameynayay
November 18, 2018 Somali Top News 0
Madaxda Maamul goboleedyada dalka oo ku shirsan Nairobi
October 6, 2018 Somali Top News 0
Nin xaaskiisa ku dilay duleedka magaalada Muqdisho